ko htike's prosaic collection: Bomb explodes in Telecommunication Office in Mudon
Burmese people can survived with candle already,next time please go to Nay Pyi Taw.please
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(KNU)နှင့် ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ(KNPP) တပ်ဖွဲ့ဝင် များက လောပိတဓါတ်အားလိုင်းအား မိုင်းထောင် ဖျက်ဆီးပြီး နယ်မြေရှင်းလင်းရေး စစ်အစိုးရ တပ်နှင့် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာ စစ်အစိုးရတပ်သားအချို့ ကျဆုံးခဲ့သည်။
ယမန်နေ့က ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံခရိုင်၊ လိပ်သိုမြို့နယ်၊ ယာဒိုကျေးရွာအနီးရှိ လောပိတ - တောင်ငူ ဓါတ်အားလိုင်းအား KNU နှင့် KNPP တပ်ဖွဲ့ဝင်များက မိုင်းထောင်ဖောက်ခွဲပြီး နယ်မြေ ရှင်းလင်းရေး စစ်အစိုးရတပ်ဖွဲ့အား ခြုံခိုတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ဟု KNU သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေး တာဝန်ခံ ဗိုလ်မှူးစောလှငွေက ပြောသည်။
“မိုင်းခွဲတာက မနက် (၁) နာရီခွဲလောက်၊ မနက် (၆) နာရီခွဲလောက်ကျတော့ သူတို့ရှင်းလင်းရေး လာတာကို စောင့်ပစ်တာ၊ (၁၀) မိနစ် တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်၊ သူတို့ဘက်က တပ်ကြပ်ကြီးတယောက် အပါအဝင် လေးယောက်ကျတယ်”ဟု ဗိုလ်မှူးစောလှငွေက ပြောသည်။
နယ်မြေရှင်းလင်းရေးလာရောက်သည့် ခလရ (၇၅) တပ်ရင်းနှင့် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားစဉ်တွင် (MA-1) မောင်းပြန်ရိုင်ဖယ်တလက်၊ (M-79) ဗုံးပစ်လောင်ချာတလက်၊ ဆက်သွယ်ရေး လျှပ်စစ်အား သွင်းစက်တလုံးနှင့် ခဲယမ်းအချို့ သိမ်းဆည်းရရှိသည်ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောဆိုသည်။
ယနေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာက ယမန်နေ့ည (၁၀) နာရီ (၄၀) မိနစ်တွင် လောပိတ - တောင်ငူ (230 KVA) မဟာဓာတ်အားလိုင်း တာဝါတိုင်အမှတ် (၂၀၆) ကို KNU မှ မိုင်းခွဲဖျက်ဆီး ခဲ့သဖြင့် တာဝါတိုင်ပြိုလဲသွားကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
ကိုယ်ကလဖန်ထိုး ကိုယ်ချိုး ကိုယ်ဝေနဲ့ နအဖ ပေးစာ
မင်းကိုဒို့အားလုံးက အယုံအကြည်မရှိဘူး ကိုယ့်လူ။
shut the hell up you sassy boy nathan! eat your own shit and getalife first!
fuck to KNU and Karen for taking advantages to get own independence when the country are in trouble.
4 August 2008 at 01:46
အင်း ကိုnathan တစ်ခုလောက်မေးပါရစေ ကိုထိုက်အဖေ က SB ကလို့ပြောတယ်လို့ ခင်ဗျားပြောတယ် ဟုတ်မဟုတ် သက်သေတစ်ခုလောက်ပေးပါလား ကျွန်တော်သိရသလောက် SB တစ်ယောက်ရဲ့ သား က အင်္ဂလန်မှာနေတာ ကျွန်တော်သိတယ် သူ့အဖေက NLD ရုံးရှေ့မှာတာဝန်ကျတာ ကင်မရာကိုင်တယ် တခါတလေ NLD ရုံးနားက ယုဇနဟိုတယ် LOBBY ထဲမှာထိုင်တတ်တယ် ဒီဟိုတယ်မှာကျွန်တော် တည်းရင်းနဲ့ သူနဲ့သိတာ သူပြောလို့သူ့သားတစ်ယောက် အင်င်္ဂလန်မှာ ရှိတယ်ဆိုတာသိရတယ် သူက SB မှာရာထူးသိပ် မကြီးပါဘူး လက်ထောက်ညွှန်မှူးလောက်တော့ မဟုတ်ဘူး နောက်နာမည်ချင်းဆင်နေတယ် ကိုနေသန် လူမှားတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် ကိုထိုက်က ဒီမိုဘလော့ကာ နာမည်ကြီးဆိုတော့ စွပ်ဆွဲတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်
ကိုထိုက်ကတော့ ဖြေရှင်းလို့ရမယ်မထင်ပါ ကိုထိုက်အနေအထားကိုလည်းနားလည်ပါတယ်
sorry ကျွန်တော့် mail ကို ပေးခဲ့မယ် parasoe@gmail.com ကိုနေသန်ရော ကိုထိုက်ပါ အမုန်းပွားမှုများကင်းပါစေ
sex5220免費影片琉璃仙境聊天室情色短片亞洲情色視訊交友☆♀ 免費影音視訊聊天 ☆♀☆♀ 夜未眠成人影城 ☆♀s383情人視訊☆♀ 一夜激情交友聊天室 ☆♀☆♀ av女優影片 ☆♀☆♀ 網路視訊聊天 ☆♀痘痘聊天室☆♀ 視訊聊天辣妹 ☆♀☆♀ 免費網友自拍影片 ☆♀☆♀ 情色電影院☆♀sex520免費影片☆♀ 成人影片 ☆♀聊天室入口 yam☆♀ 限制級影片 ☆0204情愛視訊聊天網☆♀ 成人聊天網 ☆♀免費UT視訊交友yahoo 聊天室入口☆♀ 愛愛影片 ☆♀a片區影音視訊聊天室☆♀ 激情成人網愛聊天室 ☆♀免費aaa片俱樂部msn 聊天室入口甜心寶貝貼影片av女優免費a長片線上看台灣 yahoo 聊天室入口一夜情援交聊天室線上免費a片♀ 免費體驗視訊聊天 ♀成人影片,sex貼片區免費色情短片線上觀看色咪咪影片網影片交流,免費色情ut 聊天室入口免費a片欣賞she say 聊天室入口☆♀ 限制級影片 ☆♀☆ 臺灣妹妹情色自拍 ☆杜蕾斯免費a片a片線上免費看自拍a片☆♀ 視訊影音聊天 ☆♀台灣a片王美國a片免費試看a片麗的 情色典獄長線上直播a片☆♀免費視訊交友聊天室 ☆♀ut聊天聯盟情色小遊戲tu 聊天室入口女優做愛天堂情色網情色網情色電影院撿來的av女優台灣kiss情色網情色a片ek21 聊天室入口分享自拍a片限制級試看a片美女a片av女優無碼影城a片遊戲a片免費看觀月雛乃aa片成人情色網色情a片免費a片無碼a片下載麗的 情色網a片城,免費色情影片免費aaa片俱樂部a片試看免費檳榔西施摸奶影片aa片免費看免費a片 無碼a片a片下載免費卡通a片波波情色貼圖日本大奶女優☆ 純情色妹妹自拍 ☆☆ 學生情色自拍 ☆重車論壇☆ 自拍情色圖貼照片 ☆情色a片情色文學自拍王小老鼠影片分享區情色 聊天☆ 免費自拍情色電影 ☆av女優圖貼hilive tv,免費電影小魔女免費影片av女優線上觀賞a 電影直播短片aaaa片俱樂部免費情色影片飯島愛a片歐美 a片ss383a片免費下載情色視訊美美交友情色網日本av女優免費女優電影av無碼女優日本a片線上a片aaa片免費看台灣a片免費線上看a片168視訊美女聊天室